Accueil > Gazetin'ny nosy > K3F: Fihaonambe ny 17 aprily any Fianarantsoa
K3F: Fihaonambe ny 17 aprily any Fianarantsoa
Mitodika any Fianarantsoa avokoa ankehitriny ny mason’ny mpanao pôlitika rehetra eto Madagasikara. Na ny mpomba ny fitondrana na ny mpanohitra izany dia samy milaza fa ho tonga amin’ity fihaonambe ho karakarain’ny K3F ity satria iankinan’ny raharaham-pirenena tanteraka izany sy ny hoavin’ny vahoaka Malagasy manomboka izao.
Tsara ihany no hahalalana azy ho an’ireo izay mbola tsy nahafantatra fa ny K3F (Komitin’ny fahamarinana, fandriam-pahalemana ary ny fiadanana) dia fikambanana nivondronan’ny fikambanana maro tao Fianarantsoa iray taona mahery kely teo izay. Hanatanteraka ny antson’ny fivoriamben’ny eveka tamin’ny 13 May 2017 sy ny antso nataon’ny FFKM (Fiom-bonamben’ny fiangonana kristiana Malagasy) tamin’ny 29 may 2017 ihany koa momba ny tokony handraisan’ny Malagasy andraikitra amin’izao zava-misy mampahantra tafahoatra ny Malagasy izao. Nangataka ny Malagasy rehetra tsy ankanavaka tsara sitrapo, sy ny vondron’olona tsy ankanavaka na inona sehatra misy azy eto amin’ny firenena (fiarahamonim-pirenena, antoko pôlitika, fikambanana misahana ny tantsaha, fanatanjahan-tena sy sosialy sy ny sisa…) ka mahatsiaro fa latsaka an-katerena ny firenena Malagasy ka tokony harenina.
Nisy fivoriana matetika mahakasika izany tao Fianarantsoa nandritra ny taona 2017 iny ka tao amin’ny sekoly St François Xavier Ambatomena no nanaovana izany isaka ny asabotsy. Vory lanona ny hery velona rehetra tany Fianarantsoa tamin’izany. Tonga hatramin’ireo tantsaha manodidina rehetra sy ny distrika nanambara ny alahelony sy nitantara ny zava-nisy mahazo azy ireo noho ny asan-dahalo.
Nitarika ny fanentanana tamin’izao raharaha izao ny pretra roalahy antsoina hoe Môpera Prosper avy aty Antananarivo, sy Môpera Gervais ao Fianarantsoa. Nanampy azy ireo ny izany Rivo sy Naina izany ka vetivety dia tonga ny olona nanatevin-daharana azy ireo. Koa satria tany Fianarantsoa no niforona ny hetsika ny K3F dia nandray anjara mavitrika ingahy Pety Rakotoniaina amin’ny fanentanana ny olona ary nitety faritra maro koa. Toa izany koa ingahy Razafindrandriatsimaniry Dieu Donné Michel. Tonga hatraty Antananarivo ny raharaha ka hatramin-dRavatomanga Roland, Razafindrakotohasina, Radavidson Andriamparany ary ny ankolafy Zafy Albert, ramatoa Marcelline no nanampy ny mpisehatra, raha tsy hiteny ireo olona hafa koa isika.
Fantatra fa ho tonga any amin’ity fihaonambe ity koa ny mpitarika fivavahana maro ao amin’ny FFKM sy ny mpino silamo koa.
Niitatra izany ka tonga hatrany Ambositra, Manakara, Ihosy ary Toliara. Ankehitriny dia mahenika ny faritra 22 ny K3F, ka fikambanana miisa 120 eo ho eo izao no mivondrona amin’ity K3F ity.
Efa ela no niandry izao fotoana amin’ny 17, 18 aprily 2018 izao ny hery velona rehetra eto Madagasikara. Omaly faha 10 aprily 2018 dia nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny K3f tany Toliara ka tao amin’ny hôtely Mihaja Bis tao Andabizy no notanterahana izany. Ny tao Fianarantsoa koa dia niantso mpanao gazety omaly ka tao amin’ny lapan’ny kilonga (Katôlika) no nanaovana izany. Ny tao Mahajanga koa nanao toa izany. Hatramin’ny any Toamasina sy Antsiranana no nilaza fa hisy delegasionina mafonja ho tonga any Fianarantsoa amin’ity fihaonana ity.
Inona no hitranga any Fianarantsoa satria amin’io ambohipihaonan’ny hery velona rehetra tsara sitrapo io no handinika ny raharaham-pirenena mandritra ny roa na telo andro eo ho eo? Manana ny akony manokana Fianarantsoa amin’ny fitarihana fanovana teto amin’ny firenena hatramin’izay.
Maminany ve ny K3F ka nisafidy izao fotoana izay itadiavan’ny vahoaka fiovana eo anatrehan’ny savorovoro pôlitika izao mialohan’ny fifidianana ho filoham-pirenena izay ahiana mafy fa hiteraka korontana eto amin’ny firenena ? Ho hitantsika eo ny tohiny.